Kubhadhara nzvimbo yebhizinesi panguva yedambudziko rekona - Law & More B.V.
Rental yenzvimbo yebhizinesi panguva yedambudziko re corona
Nyika yose parizvino iri kusangana nedambudziko pamwero usingafungidziriki. Izvi zvinoreva kuti hurumende dzinofanirawo kutora matanho anoshamisa. Kukuvara kwakakonzerwa nemamiriro ezvinhu aya uye kucharamba kuchikonzera kunogona kunge kuri kukuru. Chokwadi ndechekuti hapana parizvino ari padanho rekutarisa huwandu hwe dambudziko, kana kuti rinotora nguva yakareba sei. Pasinei nemamiriro ezvinhu, kubvumirwa kwenzvimbo dzebhizinesi kuchiri kushanda. Izvi zvinomutsa mibvunzo yakati wandei. Munyaya ino tinoda kupindura mibvunzo mishoma inogona kubuda nevaridzi kana varidzi vezvivakwa zvebhizinesi.
Uchiri kubhadhara renti here? Mhinduro kumubvunzo uyu zvinoenderana nemamiriro enyaya yacho. Chero zvazvingaitika, mamiriro ezvinhu maviri anofanirwa kusiyaniswa. Chekutanga, nzvimbo dzebhizinesi dzinogona kunge dzisingachashandisirwe bhizinesi, dzakadai seresitorendi uye mafi. Chechipiri, kune zvitoro zvinogona kunge zvichiri kuvhurika, asi izvo zvinosarudza kuvhara mikova yazvo.
Muroja anosungirwa kubhadhara rendi zvinoenderana nechibvumirano chembavha. Kana izvi zvikasaitika, iko kutyora chibvumirano. Iye zvino mubvunzo unomuka, panogona kunge paine simba majeure? Zvichida pane zvibvumirano muchibvumirano chekugara pamusoro pemamiriro ezvinhu anogona kushandiswa nemauto majeure. Kana zvisiri, mutemo unoshanda. Mutemo unoti pane simba rekumanikidza kana roja risingakwanise kuve nemhosva yekusatevedzera. mune mamwe mazwi haisi mhosva yemaroja kuti haakwanise kubhadhara rendi. Hazvina kujeka kana kutadza kuzadzisa zvisungo zvinokonzerwa nekoronavirus kunoguma musimba majeure. Sezvo pasina pekutangira kweizvi, zvinonetsa kutonga kuti mhedzisiro ichave yakadii pakadai. Chii chinoita basa, zvisinei, ndiyo inowanzo shandiswa ROZ (Real Estate Council) kontrakiti mune iyi mhando yehukama hwehukama. Muchibvumirano ichi, chikumbiro chekudzikiswa kwemaroja chakasarudzika seyakajairwa. Mubvunzo ndewekuti muridzi wemba anogona zvine musoro kuchengetedza ino poindi yekuona mune yazvino mamiriro.
Kana muridzi akasarudza kuvhara chitoro chake, mamiriro acho achange akasiyana. Nekudaro, parizvino hapana chisungo chekuita, chokwadi ndechekuti kune vashoma vashanyi uye saka mari shoma. Mubvunzo ndewkuti mamiriro ezvinhu anofanira kunge ari zvachose pakubvisa muridzi. Hazvibviri kupa mhinduro yakajeka kumubvunzo uyu nekuti mamiriro ese ezvinhu akasiyana. Izvi zvinofanirwa kuongororwa pane imwe nyaya-ne-kesi hwaro.
Mamiriro ezvinhu asingatarisirwi
Vese muridzi uye muridzi wemba anogona kukumbira mamiriro ezvinhu asingafanoona. Kazhinji, dambudziko rezvehupfumi rinozvidavirira pamabhizinesi, kunyange kazhinji zviitiko izvi zvinogona kusiyana nekuda kwedambudziko rekorona. Matanho anoshandiswa nehurumende anokwanisa zvakare kutorwa mukufungwa. Chikumbiro chakavakirwa pamamiriro ezvinhu asingafanoonekwi chinopa mukana wekubvumidzwa kuporeswa kana kubviswa mudare. Izvi zvinogoneka kuti kana muridzi asingachakwanisi kubvumidzwa kuenderera mberi muchibvumirano. Sekureva kwenhoroondo yeparamende, mutongi anofanirwa kuita nekuzvidzora maererano nenyaya iyi. Tave zvakare mumamiriro ezvinhu ekuti matare akavharwa zvakare: saka hazvizove nyore kuwana mutongo nekukurumidza.
Kushaikwa mune imba yakabhadharwa
Mushandi anogona kuda kudzikiswa muripo kana muripo kana apererwa. Kushaikwa kwemamiriro ezvinhu epfuma yacho kana chero imwe mamiriro ezvinhu kunoguma nekusawana kunakirwa kwemubhadharo muridzi anofanirwa kupi kutanga kwechibvumirano chekurenda. Semuenzaniso, kushomeka kunogona kunge kuri: kukanganisa kwekuvaka, denga rinodonha, kuumbwa uye kutadza kuwana mvumo yekushandisa nekuda kwekusavapo kwe emergency. Matare kazhinji haafariri kutonga kuti pane mamiriro ezvinhu anofanirwa kunge ari account yeiye muridzi wepamba. Chero zvazvingaitika, bhizinesi rakashata nekuda kwekushayikwa kweruzhinji haisi mamiriro ezvinhu anofanirwa kubhadharirwa kumuridzi wemba. Ichi chikamu chemabhizimusi panjodzi. Izvo zvinotorawo basa ndezvekuti mune dzakawanda kesi nzvimbo dzakabvarurwa dzinogona kushandiswa. Naizvozvo mamwe maresitorendi akawanda, ari kuendesa kana kuti kudya kwavo kunotora sedzimwe nzira.
Zvizhinji zvekubatira nzvimbo dzebhizinesi zvinosanganisira chinosungirwa kushanda. Izvi zvinoreva kuti roja rinofanira kushandisa nzvimbo yebhizimisi yakabhadharwa. Mumamiriro akakosha, chisungo chekushandisa chinogona kubuda kubva kumutemo, asi izvi hazvisi izvo nguva dzose. Vanenge vese varidzi vezvivakwa zvebhizinesi uye mahofisi nzvimbo vanoshandisa iwo maROD mamodheru. Izvo zvese zvinopihwa zvine chekuita neROD models zvinotaura kuti muroja anoshandisa nzvimbo yakabhadharwa "zvinobudirira, zvakakwana, nemazvo uye pachezvayo". Izvi zvinoreva kuti roja iri pasi pechisungo chekushanda.
Parizvino, hapana muyero wehurumende muNetherlands unoraira kuvharwa kwenzvimbo yekutengesa kana nzvimbo yehofisi. Nekudaro, hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvese, zvekudya nekumwa zvivakwa, makirabhu emitambo uye emitambo, sauna, makirabhu ezvepabonde uye zvitoro zvekofi zvinofanirwa kuramba zvakavharwa munyika yose kusvikira zvaziviswa. Kana muridzi akasungirwa nemvumo nehurumende yekuvharisa imba yaanokweretesa, muridzi wacho haazopiwi mhaka nekuda kweizvi. Ichi chiitiko icho, maererano nemamiriro azvino mamiriro ezvinhu iye muridzi haafanire kuzvidavirira. Pasi pezvose zvinopihwa, muridzi anosungirwa kuteedzawo mirau yehurumende. Semushandirwi, anosungirwawo kuve nechokwadi chekuchengetedza nzvimbo yekushanda. Ichi chisungo chinobva nekusafumura vashandi munjodzi yekusvibiswa necoronavirus. Mumamiriro ezvinhu aya, muridzi wemba haakwanise kumanikidza muridzi kushanda.
Nekuda kwehutano hwevashandi uye / kana vatengi, tinoona kuti vanhu vanoregedza pachavo vanosarudzawo kuvhara zvivakwa zvakapomedzerwa napo, kunyangwe kana vasina kurairidzwa kudaro nehurumende. Pasi pemamiriro ezvinhu aripo, tinotenda kuti varidzi vepamba havazokwanise kuisa chikumbiro chekuzadzisa chisungo, kubhadhariswa faindi kana kubhadhara mari yekukuvadza. Kubva pane rationality uye kuringana, pamwe nechisungo chekupedza kukuvara kwezvikamu pamuridzi wepo sezvazvinogona, tinozviona zvakaoma kufunga kuti muridzi wepamba acharamba kuvhaira (kwenguva pfupi) kuvharwa.
Kushandiswa kwakasiyana kwezvivakwa zvearenda
Kudya uye zvinwiwa zvivakwa zvakavharwa panguva ino. Nekudaro, ichiri kubvumidzwa kunhonga uye kuendesa chikafu. Nekudaro, chibvumirano chekurendesa chinopa kazhinji yenguva chinangwa chakasimba; chii chinoita kunhonga zvakasiyana neresitorendi. Nekuda kweizvozvo, roja rinogona kuita zvinopesana nechibvumirano chekurenda uye - pamwe - kurasikirwa nemari.
Mune mamiriro ezvinhu aripo, munhu wese ane basa rekudzikisira kukuvara kwake zvakanyanya sezvazvinogona. Nekuchinjira kune yekuotora-kumusoro / basa rekutumira, murimi anoenderana. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, zvakaoma mune zvine hungwaru kudzivirira pfungwa yekuti izvi zvinopesana nechinangwa checibvumirano. Muchokwadi, muridzi wemba anokwanisa kuve nechikumbiro pamuridzi kana iye asingaite zvese musimba rake kuti bhizinesi rake rimhanye kuti akwanise kubhadhara rendi.
Mune mamwe mazwi, munhu wese anosungirwa kudzikisira kukuvara kwavo zvakanyanya sezvinobvira. Hurumende yatozivisa nzira dziri kure kusvika dzekuti vabatsire mabhizinesi nekudzora kudzikisira kwavo zvemari. Inokurudzirwa kushandisa mukana wematanho aya. Kana muridzi aramba kudaro, zvinogona kutariswa kuendesa kurasikirwa kuna iye muridzi wemba. Izvi zvinoshandawo zvinopesana. Zvichakadaro, vezvematongerwo enyika vakadaidzira zvakare varidzi veminda kuti vatore mwero munguva inouya, kuitira kuti njodzi igovaniswe.
Kunyangwe roja nemuridzi wemba vaine hukama hwechibvumirano nemumwe uye musimboti wekuti 'chibvumirano chibvumirano'. Tinokurudzira kutaura kune mumwe nemumwe uye kutarisa mikana. Muroja nemuridzi wemba vanogona kuzosangana munguva dzino dzakasarudzika. Nepo roja risina mari nekuda kwekuvharwa, muridzi wemba anodhura zvakare anoenderera. Zviri mukufarira kwemunhu wese kuti mabhizinesi ese ari maviri anorarama uye kukunda dambudziko iri. Nenzira iyi, muroja nemuridzi wemba vanogona kubvumirana kuti rendi ichabhadharwa zvishoma uye kukanganisa kuchazobatwa panovhurwa nzvimbo yebhizinesi. Tinofanirwa kubatsirana pazvinokwanisika uye, kunze kweizvozvo, varidzi vedzimba havabatsirike nevanoroja mari. Mushure mezvose, roja nyowani haisi kuwanikwa nyore munguva dzino. Chero zvaungaita sarudzo, usaite nekukurumidza kuita sarudzo uye ngatitaurire iwe pazviitiko.
Nekuti ikozvino mamiriro ezvinhu haafungirwe, tinogona kufungidzira kuti izvi zvinogona kumutsa mibvunzo yakawanda kwauri. Isu tinoramba takatarisa pane izvo zviitiko uye tinofara kukuzivisai nezvechazvino mamiriro ezvinhu. Kana iwe uine chero mibvunzo nezvechinyorwa ichi, ndapota usazeza kubvunza magweta e Law & More.
Next Siginicha yedhijitari uye kukosha kwayo »
pashure «Kubhuroka chikumbiro